नेपालमा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा गैंडाको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा १०७ गैंडा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय गैंडा गणना २०७७ को नतिजा सार्वजनिक गर्दै वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले नेपालमा गैंडाको संख्या ७५२ पुगेको जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २०१५ मा भएको गणनाअनुसार नेपालमा ६४५ गैंडा थिए ।
शुक्रवार सकिएको गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६९४ वटा गैंडा भेटिएका छन् । यो संख्या सन् २०१५ मा ६०५ मात्रै थियो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक अन्य ३ राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्यामा वृद्धि भएको ओलीले बताए । ओलीका अनुसार चितवनपछि सबैभन्दा बढी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३८ गैंडा भेटिएका छन् ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १७ गैंडा भेटिएका ओलीले बताए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने ३ मात्रै गैंडा फेला परेको ओलीले बताए । अघिल्लो गणनामा पर्सामा ४ वटा गैंडा पाइएका थिए ।
राष्ट्रिय गैंडा गणनाअनुसार नेपालमा १४६ भाले र १९८ पोथी भेटिएको उल्लेख गर्दै बाँकी ४०८ गैंडाको लिङ्ग पहिचान हुन सकेको छैन ।
५२० वयस्क गैंडा भेटिँदा ९६ अर्धवयस्क र १३६ बच्चा गैंडा भेटिएका ओलीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. दीपक खरालले चैत ९ गतेदेखि शुरू गरिएको गणना चैत २७ गते राति मात्रै सकिएको बताए ।
गणना सकिएपछि शुक्रवार र शनिवार तथ्यांक संकलन तथा प्रविष्ट गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी गैंडा गणनामा २३ दिन लागेको भन्दै खरालले गणनामा २५० गणक तथा ४३ हात्ती प्रयोग भएको जानकारी दिए । गैंडा गणनाकै क्रममा ध्रुवे हात्तीले आक्रमण गर्दा ७ जना घाइते भएको तथा १ जना गम्भीर घाइतेको काठमाडौंमा उपचार हुँदै गरेको उनले बताए ।
हात्तीले आक्रमण गरेपछि १ दिन र होलीको दिनमा गैंडा गणना हुन नसकेको भन्दै खरालले अन्य दिन बिहान ५ बजेदेखि राति अबेरसम्म गणना गरिएको जानकारी दिए । पर्सा र चितवनलाई १९ ब्लकमा विभाजन गरेर गैंडा गणना गरिएको थियो ।